पाँच पाण्डवको मृत्यु (भाग १ ) « LiveMandu
पाँच पाण्डवको मृत्यु (भाग १ )
२२ पुष २०७५, आईतवार ०७:५०
रामायणको अन्त्य पछि पाण्डवहरुको मृत्युका विषयमा धेरै भनाई अनि तथ्यहरु रहेको त पाइन्छ. आज हामी पाण्डवहरुको मृत्यु विषयमा कुरा उक्काउन चाहन्छौं
यस आलेखमा पञ्चपाण्डवको हिमाल आरोहण, मृत्यु , देवलोक यात्रा अनि घृणाका किस्साहरु हामीले समावेश गरेका छौं . महाभारतको युद्ध पश्चात युधिष्ठिरले न्यायपूर्ण तरिकाले शासन गरिरहे, युधिष्ठिर निष्ठा अनि सत्यमार्गमा अडिग रुपमा लागि नै रहे तर अन्य पाण्डवहरुको हकमा भनें त्यस्तो निष्ठा कायम हुन सकेन् . समय ब्यतित हुँदै अन्य भाइहरुले भने आफैले र अरुले भोगेका धेरै कुराहरु बिर्से । यतिमात्र नभई श्री कृष्णले भनेका कुराहरु , गीताका सारहरु समेत बिर्से । युद्धका डोबहरु पुरिएका थिएनन्, ईतिहासकै सर्वाधिक ठुलो महायुद्ध जसमा लाखौँ मानिसको मृत्युको भागीदार युद्धका दुई पक्षहरु पाण्डव र कौरव पक्षहरु नै हुन् . यस्तो अवस्थामा क्रमश पाण्डव दाजुभाईले आफैले भोगेका द्वन्द्वहरु समेत भुल्दै गए । ब्यबहार अनि राजकाजमा उनीहरु यति ब्यस्त भए कि उनीहरुका लागि धर्म अनि अध्यात्म भन्दा राज्य शासनको दैनिक गतिविधि बढी महत्वपूर्ण हुँदै गयो । युधिष्ठिर मात्र एक जना थिए जसले कृष्णका हरेक वाणीहरु याद राखे र दायित्व पूरा गर्ने क्रममा आफुले सकेको जति अर्तीहरु ब्यवहारमा अनि जीवनमा उतारे । बाँकी पाण्डव भाईहरुले राज्यभोग गर्दै भौतिकतामा लीन भई राज्याधिकारी बन्नैमा व्यस्त रहे । कोही पनि सर्वगुण सम्पन्न त पक्कै हुँदैन तर सर्वगुणसम्मपन्नताको निकट रहनका लागि के गर्नुपर्दछ त ? यस आलेखले केही प्रकाश पार्न खोज्दछ ।
यो कुरा युधिष्ठिरले केही हदसम्म बुझेका थिए तसर्थ एक दिन युधिष्ठिरले आफ्ना भाइहरुसित जीवनबारे बुझ्नका लागि मण्डरा हिमाल चढ्ने प्रस्ताव राखे । राजकाज भन्दा धेरै पर अनि अलग्ग भएको हिमाल चढ्ने क्रममा आफुले आफ्ना भाइहरु अनि द्रोपदीसंग धर्म अनि अध्यात्मका कुरा गर्ने र सरसल्लाह हुने युधिष्ठिरको सोच थियो . पाण्डवहरु श्री कृष्णसँग बस्दथे तर पनि उनीहरुलाई जीवनबारे बुझ्नपर्ने जरुरी भयो, राजकाजले उनीहरुको प्रार्थमिक्ता भगं गरेको थियो । मानिसहरुको समस्या के हो भने उनीहरुले आफुसँगै भएका महत्वपूर्ण कुराहरु देख्न सक्दैनन् । भगवानसँगै बस्दथे र पनि उनीहरुलाई जीवन बुझ्न निस्किनपर्ने भयो । बाँकी भाइहरुले पनि दाइको कुरा स्वीकार गर्दै भ्रमणमा निस्किने अनि हिमाल चढ्ने भएछन् । उनीहरु हिमाल चढ्न निस्के, चिप्लो बाटो हुँदै उनीहरु हप्तौँ लगाएर हिमाल चढ्न थाले । हिमालको बाक्लो हिँउ अनि निकै अफ्ठेरो बाटो अझै गाह्रो र चिप्लो हुदै जान थाल्यो ।
यही क्रममा एक दिन हिमाल को टाकुरा बिचको साँघुमा द्रोपदी चिप्लेर लडिन् र साँघु मुनी खसिन् । उन्ले आफ्नो वचावका लागि कुनै गुञ्जाइश गर्ने नपाई अनि कुनै आवाज पनि ननिकाली हिमालबाट लडेर ज्यान गुमाइन् । यता, युधिष्ठिर भने एक पटक पनि पछाडि फर्केनन् , उनी शिखरमा पुग्न केन्द्रित थिए र अघि बढिरहे । बाँकी भाइहरु बल्लतल्ल उनीसम्म पुगेपछि भीमले उनलाई शोकमा विह्वल भएर सोधे, “किन द्रौपदी यहाँबाट लडेर हामीसँग छुट्टिनप¥यो ? उनले जीन्दगीभर दुःख नै त खेपिन् र सदैव हाम्रै साथमा रहिरहिन् । उसले के बिराइन् र यसरी हिमालमा उनले ज्यान गुमाउनप¥यो ? आखिर द्रोपदीले आफ्नो कुन पापको सजाय भोगिन ? भीम आलाप गर्न थाले ।
भीमलाई सम्झाँउदै युधिष्ठिरले उनलाई भने, “यसमा धेरै कुरा छ । द्रोपदीले उनका पाँचै श्रीमान लाई बराबर माया दिने वाचा गरेकी थिइन् र यसलाई आफ्नो कर्तव्य नै मानेकी पनि थिइन तर उनले कहिल्यै त्यसो गर्न सकिनन् । उन्को मायामा सदैव केही उतारचढाव रहिनै रहन्थ्यो . उनले अन्तस्करणमा सदासर्वदा अर्जुनलाई मात्र माया गरिन् र उनको मात्र पत्नी बन्ने दृढ लालसा राखिन् । हामी बाँकी भाइसँग उनले आफ्नो जिम्मेवारी मात्र पूरा गरिन् तर उनको माया सधैँ अर्जुनको लागि मात्र रह्यो । अरु त अरु कर्ण पनि हाम्री आमा कुन्तीका पुत्र हुन् भन्ने थाहा पाएपछि कर्णलाई पनि पतिको रुपमा प्राप्त गर्ने इच्छा राखिन् । यही दुई वटा कारणले उनी खसिन् ।” अब पाण्डव दाजुभाईहरु विगतका दिनमा आफुले पनि गरेका केही भुल अनि अन्यायका कुराहरु मनमनै खोतल्न थाले ।
यसरी उनीहरुले शोक लाई थाम्दै फेरी आफ्नो यात्रा सुरु गरे । त्यसपछि नकुल खसे । यसपछि उनीहरुले युधिष्ठिरलाई फेरी प्रश्न गरे । अब नहकुल किन खसे ? युधिष्ठिरले भने, “उनी असाध्यै घमण्डी मानिस थिए । उनी आफुलाई असाध्यै सुन्दर र पौरुषत्व भएको मान्थे र उनको घमण्डले नै उनको पतन गरायो ।” उनीहरु हिँड्दै गए, यसपालि द्रोपती, नकुल पछि कान्छा भाई सहदेव हिँउमा चिप्लेर खसे । उनीहरुले आफ्ना दाइसँगै प्रश्न राखे, सहदेव किन खसे ? उनले कहिल्यै एक शब्द पनि बोलेन्न, उनी त हामीमध्य सर्वाधिक भद्र थिए र पनि किन खसे? उनी एक शब्द पनि बोलेनन् तर यो उनको भद्रताले नभई उनको आत्मसन्तुष्टि र दम्भका कारणले हो भन्ने जवाफ उनीहरुले पाए । अब त पाण्डवहरु अब कस्को पालो आउने हो भनेंर त्रासमा हिमाल आरोहण गरिरहेका थिए त्यहीबेला ठूलो आवाज र गर्जनका साथ भीम खसे । भीमजस्ता मायालु र निर्दोष मानिस किन खसे भनी अर्जुनले सोध्दा युधिष्ठिर भन्छन, “उनीमा खन्चुवापन र अत्याधिक लालच थियो । उनी खानेबेलामा आफु मानव रहेको कुरा नै भुल्दथे र मान्छेलेजस्तै नभई पशुले जसरी खान्थे र उनी सधैँ अरुको दुःखमा रमाइलो मान्थे ।
हामी कहिलेकाहीँ अरुको दुःखको कारण बन्न सक्छौँ र त्यस्तो नियती को कुरा फरक हो तर अरुको दुःखमा रमाउन भनें कदापि हुन्न । भीमलाई अरुको दुःखमा निकै आनन्द आउँथ्यो र यही उनको पतनको कारण बन्न पुग्यो ।” अन्त्यमा अर्जुन पनि खसे । उनको पालोमा प्रश्न सोध्ने कोही भएन्न् । युधिष्ठिर एक्लै बोल्दै अघि बढे । उनको धनुविद्याको घमण्डले उनी सखाप भए । उनी आफुलाई संसारकै उत्कृष्ट धर्नुधर मान्थे । उनी राम्रा धर्नुधर त थिए तर संसारकै उत्कृष्ट होइन । उनलाई अरुको औँला काटेर उत्कृष्ट बन्ने हक थिएन, त्यो त छल थियो । अर्जुनले एकलव्यको जीवनमा अन्याय गरेका हुन र उनी सधैँ उनीभन्दा राम्रा धर्नुधर अरु होलामा बढी चिन्तित र असुरक्षित मान्थे । यसरी युधिष्ठिर मात्र यात्राको अन्तिमसम्म पुग्दछन् । कथा अनुसार यदि असल भई जीवन यात्राको अन्त्यसम्म पुग्न सकेमा मानिस पार्थिव शरीरसहित देवलोकमा पुग्न सक्नेछन् । युधिष्ठिर एक जना मात्र शरीरसहित देवलोकमा पुग्ने भए । देवलोकबाट उनलाई लिन दूतहरु आइपुग्छन् । तर, युधिष्ठिरको साथमा कुकुर पनि देखेपछि दूतले कुकुरलाई लान नसक्ने बताउँछन् ।
बाँकी अर्को भागमा . अर्को भागमा देवलोकको अवस्था, युधिष्ठिरको अवस्थिती अनि पुन युधिष्ठिर, द्रोपती अनि कौरव, शकसुनी लगायतको भेटघाटको प्रसंग र बस्तुस्थिती लिएर आउने छौं ।
भाग २ पढ्न यहाँ क्लीक गर्नुहोस्